Isinkwa Semihla Ngemihla
Ake sifunde okuqukethwe yilokhu okulandelayo: Kumele ukuqonde kanjani ukubusiseka? Yini okumele uyazi ngomthetho? Kumele ichazwe kanjani intukuthelo? Kumele senzenjani mayelana nokuphinga? Kuthiwani, futhi imithetho enjani ehambisana nesahlukaniso, ubani ongahlukanisa? Kuthiwani ngezifungo, iso ngeso, thanda izitha zakho, isifundiso ngokunikela, kanye nokunye? Zonke lezi zinto zihambisana nayo yonke ingxenye yemikhuba yenkolelo yesintu kuNkulunkulu, kanye nokulandela kwabo uNkulunkulu.
Okulandelayo：Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III